Gear Reducer, Cycloidal Speed ​​Reducer, Kankana Gearbox, DC Motor - Devo Gear
Fametrahana mazava tsara planeta fitaovana reducer
Nmrv kankana fitaovana reducer, dia kely eo amin'ny boky, mazava lanjany, mamirapiratra avo amin'ny fahombiazana, lehibe amin'ny Output Torque, mihazakazaka malefaka sy iva feo. Izany suitbale toerana rehetra.
R andian-dahatsoratra helical fitaovana reducer dia mandroso famolavolana foto-kevitra nampidirina avy any ivelany tao anatin'ny taona vitsivitsy. Izany dia mivoatra sy vokarina amin'ny rafitra mahay mandanjalanja, mafy javatra iray, azo itokisana avo, ny hafanana ambany Mitsangàna, fahaiza-manao lehibe sy tsara mitondra mitambatra fampisehoana miaraka amin'ny tena zava-misy ny tanjona eto amin'ny firenentsika. Azo miaraka F andian-dahatsoratra, K andian-dahatsoratra, S andian-dahatsoratra, sns mba hahazoana ambany hafainganam-pandeha sy ny Torque bebe kokoa.
LATEST NY VOKATRA
Devo R Series script 37 ~ 157 henjana nify flank singl ...
Devo R Series tongotra tsoavaly helical fitaovana reducer
WPA fitaovana reducer marindrano fitaovana boaty mijidina W ...
WPA hafainganam-pandeha reducertransmission fitaovana reducer Hory ...
WPA WPS kankana hafainganam-pandeha reducer reductor gearbox wpa ...
high quality zq 500 350 fitaovana reducer zq gearbo ...
(J) 250-1000 ZQ Series soft surface gearbox fitaovana ...
(J) ZQ 850 malefaka fitaovana surface gearbox for constru ...
(J) ZQ 650 malefaka fitaovana surface gearbox for constru ...
High quality script andian-dahatsoratra helical fitaovana reductor
zoro tsara planeta reducer gearbox serv dingana ...
Mafana manerantany 2019 varotra hafainganam-pandeha avo Torque reducer ...
Jiangsu Devo Gear Teknolojia Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2018. nisiany mponina amin'ny alalan'ny andian-tanora amin'ny fanahy ary marisika. Efa tapa-kevitra ny hanao fitaovana tsara boaty tamin'ny 100 taona. Ny orinasa dia 50-100 olona, ​​amin'ny matihanina R & DIEM, D, famolavolana, ny varotra ekipa, mivarotra vokatra tsara ao an-trano sy any ivelany, ny tsena no mifantoka amin'y overseas.Provide mpanjifa indrindra amin'ny solutions.On manokana ny fototry ny reciprocity sy ny fandraisana
No. 403, Fanorenana 2, Material Market, No. 170, Xiadian Road, Xuzhou, Jiangsu, Sina (Tanibe)
Nmrv130, Nmrv050, Nmrv Kankana Gearbox , Gearbox Nmrv , Nmrv63, Nmrv Reducer,